GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Maya Mexican Sign Language Mingrelian Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Quiche Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mmehie bụ ihe ọ bụla mmadụ mere ma ọ bụ ihe ọ bụla mmadụ chere n’obi ya nke megidere iwu Chineke. Ọ pụtara mmadụ imebi iwu Chineke ma ọ bụ ime ihe na-adịghị mma n’anya Chineke. (1 Jọn 3:4; 5:​17) Baịbụl kwukwara na ọ bụrụ na mmadụ ahapụ ime ihe ọ ma na ọ dị mma, ọ bụụrụ onye ahụ mmehie.​—Jems 4:​17.
Ebe ọ bụ Chineke kere anyị, o bụ ya kwesịrị ịna-agwa anyị ihe anyị ga na-eme. (Mkpughe 4:​11) Anyị ga-azakwa ya ajụjụ banyere ihe ndị anyị mere.​—Ndị Rom 14:12.
Mba. Baịbụl kwuru na “mmadụ niile emehiewo, ha adịghịkwa eru ebube Chineke.” (Ndị Rom 3:​23; 1 Ndị Eze 8:​46; Ekliziastis 7:​20; 1 Jọn 1:8) Gịnị mere o ji dị́ otú ahụ?
Adam na Iv, bụ́ ndị mbụ Chineke kere, abụghị ndị mmehie ná mmalite. Ọ bụ n’ihi na ha zuru oké. Chineke kere ha n’onyinyo ya. (Jenesis 1:​27) Ma, ha nupụụrụ Chineke isi, gharazie izu okè. (Jenesis 3:​5, 6, 17-​19) Mgbe ha mụrụ ụmụ, ha bufere ha ezughị okè na mmehie. (Ndị Rom 5:​12) Eze Devid kwuru, sị: “Ebu m njehie pụta mgbe a mụpụtara m site n’ihe mgbu.”​—Abụ Ọma 51:5.
Otú ọ jọruru njọ. Baịbụl dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị zere mmehie ndị dị́ oké njọ dị ka mmekọahụ rụrụ arụ, ikpere arụsị, izu ohi, ịnụbiga mmanya óké, ịnara mmadụ ihe n’ike, igbu ọchụ na ime mgbaasị. (1 Ndị Kọrịnt 6:​9-​11; Mkpughe 21:8) Baịbụl gosiri na mmehie ndị a dị iche ná mmehie ndị mmadụ na-echeghị echiche ma ọ bụ na-akpacharaghị anya mee, dị ka, ime ma ọ bụ ikwu ihe ga-ewute ndị ọzọ. (Ilu 12:18; Ndị Efesọs 4:​31, 32) Ma, Baịbụl gbara anyị ume ka anyị ghara iwere mmehie ọ bụla ka ihe na-enweghị ihe ọ bụ n’ihi na o nwere ike ime ka anyị mee nke dị́ oké njọ.​—Matiu 5:​27, 28.
Ihe e bu n’obi mee ya. Ụfọdụ ndị na-eme mmehie n’ihi na ha amaghị ihe iwu Chineke kwuru. (Ọrụ Ndịozi 17:30; 1 Timoti 1:​13) Ọ bụ eziokwu na Baịbụl anaghị ekwu na mmehie ndị ahụ dị mma, kama o gosiri na ọ dị iche ná mmehie ndị nke mmadụ kpachaara anya mee. (Ọnụ Ọgụgụ 15:30, 31) Ọ bụ ndị nwere ‘ajọ obi’ na-akpachara anya eme mmehie.​—Jeremaya 16:12.
Ugboro ole e mere ya. Baịbụl gosikwara na e nwere ihe dị iche ná mmehie mmadụ mere otu ugbo na mmehie mmadụ na-eme ugboro ugboro. (1 Jọn 3:​4-8) Chineke ga-ebibi ndị kpachaara anya na-eme mmehie n’agbanyeghị na ha amụtala otú ha ga-esi na-eme ihe dị́ mma.​—Ndị Hibru 10:26, 27.
Mmehie dị oké njọ mmadụ mere nwere ike ịna-ewute onye ahụ, obi ya ana-ama ya ikpe. Dị ka ihe atụ, Eze Devid dere, sị: “Njehie m erikpuwo isi m; dị ka ibu dị arọ, ọ dị arọ nke na agaghị m ebuli ya.” (Abụ Ọma 38:4) Ma, Baịbụl gosiri na olileanya dị. Ọ sịrị: “Ka onye ajọ omume hapụ ụzọ ya, ka onye ọjọọ kwụsị iche echiche ọjọọ ya. Ya laghachikwuru Jehova, bụ́ onye ga-emere ya ebere, ya laghachikwuru Chineke anyị, n’ihi na ọ ga-agbaghara ya mmehie ya n’ụzọ dị ukwuu.”​—Aịzaya 55:7.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Bụ Mmehie?
ijwbq isiokwu 96
Baịbụl Ò Nwere Ike Ime Ka Obi Ruo Ndị Obi Ha Na-ama Ikpe Ala?